မိတ်ဖက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း - သန်းထောင်ပေါင်းများစွာ | မိတ်ဖက်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ မိတ်ဖက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လွတ်လပ်သောမိတ်ဖက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အခမဲ့စီးပွားရေးစတင်ခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အကြံဥာဏ်နှင့်အကြံဥာဏ်များလိုအပ်သောတစ် ဦး ချင်း၊ စီးပွားရေးနှင့်မိသားစုများနှင့်ပေါင်းစည်းသည်။
8+ သန်း Vaccancies ။ ထိုက်တန်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိသန်းချီရှိသောအလုပ်ရှင်များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်။ လျှောက်ထားသူများသည်သူတို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းများကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်အကိုင်များကိုကောင်းစွာသိရှိနိုင်ရန်အလုပ်အကိုင်သတိပေးချက်များကိုဖန်တီးနိုင်သည်
အလုပ်ရှင်ဝင် / မှတ်ပုံတင်ပါ
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဝင်မည် / မှတ်ပုံတင်မည်
ကုမ္ပဏီများအတွက်ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
မှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေရန်သင်၏ HR ကုမ္ပဏီများနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သည်။
HR Consulting၊ HR စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လုပ်ခလစာ၊ PEO နှင့်လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးလိုအပ်ချက်များစသည့် HR ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Classified ကဏ္ section သည်ကမ္ဘာတစ်လွှားမှလူများအားကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်အလွယ်တကူခွင့်ပြုသည့်အရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုထက်ပိုသည်။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းပြီးသည်နှင့်စာရင်းသည်ဒေတာဘေ့စ်မှအလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်သည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော tool ကို။
ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်၌စာရင်းပြုမည့်အစား၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းကိုသီးသန့်ခွဲခြားထားပါသည်။ သင့်လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါမည်။
ရုံးခန်း၊ ဆိုင်ခန်း၊ စီးပွားရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးမြေများကို ၀ ယ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
အကြှနျုပျ၏ Properties ကို
Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည် portal တွင်စာရင်းပြုမည့်အစားကိုယ်ပိုင်အိမ်ခြံမြေအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်ကိုပြောပြပါ။ နိုင်ငံတကာကျယ်ပြန့်သောကွန်ယက်ဖြစ်သော်လည်းသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်သွင်းပါမည်။
စီးပွားရေး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ နိုင်ငံတကာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ ဘဏ္financeာရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊
အရေးပါကြောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်း! တစ် ဦး ချင်း၊ ကျောင်းသား၊ အလုပ်ရှာသူများနှင့်မိသားစုများအတွက်အသုံး ၀ င်သောသတင်းများ။ သတင်းများကိုနေ့စဉ်သတင်းများအရပုံမှန်ရယူသည်။
လာမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေ၊ အလုပ်တွေ၊ ပြပွဲတွေ၊ နည်းပညာတွေ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ခရီးသွားလာရေး၊ ပညာရေး၊ ဖြစ်ရပ်များကိုအပတ်တိုင်း update လုပ်နေကြသည်။
Partner Programme - Partner၊ Affiliate or Franchise
ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်အစီအစဉ်သည်လူတစ် ဦး အားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ အလွတ်သို့မဟုတ်အိမ်ရှင်မဟုတ်လားလူတိုင်းအတွက်စီးပွားရေးနှင့် ၀ င်ငွေရရန်အခွင့်အလမ်းများကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ရိုးရိုးလေးရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှစျေးကွက် ၀ င်နိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကို ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးထားပါသည်။
Partner Programme - သုညရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်သည်
တစ် ဦး ဦး ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ
သင်၏အမြင်များ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာစွာကြိုဆိုပြီးသူတို့ကိုချက်ချင်းနှင့်စိတ်ရှည်စွာဖြေကြားပေးပါမည်။
မှတ်ချက် * သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီအရသင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတင်းကြပ်စွာလျှို့ဝှက်ထားသည်။
ကေနဒါ 16479456704 +
ၾသစေတးလ် 61290984441 +
ပိုလန် 48226022326 +
စင္ကာပူႏုိင္ငံ 6531593709 +
ဘရာဇီး 556140426941 +
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 19299992153 +
အာမေးနီးယား 37495992288 +
စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား? အသုံးပြုသူအသစ်လား။ Register
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် နေထိုင်ခွင့် စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ
ယနေ့စီးပွားရေးစတင်ပါ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဘဏ်အကောင့် ကုန်သည်အကောင့် Virtual ရုံး Vitrual နံပါတ်များ CRM Solutions ဘဏ္Licာရေးလိုင်စင်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Dashboard ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ယောဘသည်ရှာရန်
ရှာရန် Properties ကို သင့်ရဲ့ Dashboard ပစ္စည်းတင်ပါ
ဒီေန့ပါဝင္ရန္ မိတ်ဖက် Dashboard သင့်အဖွဲ့ကိုကြည့်ပါ တစ် ဦး ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ
သင်၏ Corporate Account သို့ဝင်ပါ
အလုပ်ရှင် Dashboard အလုပ်အကိုင်နေရာများ ( အခမဲ့ )
အိုင်တီန်ဆောင်မှုများ web Design web development အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖြေရှင်းနည်းများ အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး software ကိုဖြေရှင်းချက် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ 106 နိုင်ငံများ
နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၁ နိုင်ငံအတွက်ယာယီနေထိုင်ခွင့်၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ နိုင်ငံသား၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်နှင့်ဗီဇာအထောက်အပံ့
မိသားစုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနိုင်ငံပေါင်း ၅၉ နိုင်ငံမှလူသစ်များသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုးချဲ့နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောက်ပံ့မှုများပေးပါသည်။
တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၀ ရှိ
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံပေါင်း ၄၈ နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအစီအစဉ်များနှင့်နေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ်များအတွက်ဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။
တစ် ဦး ချင်းစီ၊ မိသားစုများ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၈ နိုင်ငံရှိကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းများအားကျွန်ုပ်တို့မှအထူးဗီဇာအကူအညီများပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၈) နိုင်ငံသို့လူတစ် ဦး ချင်းစီ၊ မိသားစုများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနိုင်ငံအသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချရန်နှင့်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုးချဲ့ရန်ကူညီသည်။
အတွေ့အကြုံနှင့်ဘတ်ဂျက်အပေါ် အခြေခံ၍ အကောင်းဆုံးသင့်လျော်သောနိုင်ငံအကြံပြုချက်များ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအစီအစဉ်များနှင့်နေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ်များကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအခြေခံသောနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များကိုနိုင်ငံ ၄၆ နိုင်ငံအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးအစီအစဉ်ကိုထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
နိုင်ငံပေါင်း 46 အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံအစီအစဉ်များ
နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားအစီအစဉ်များအတွက် 100% ဥပဒေရေးရာနှင့်အစိုးရခွင့်ပြုချက်။ ဥပဒေအကြံပေး
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ 106 နိုင်ငံများ။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာဖွေနေသောအလုပ်ရှင်များကို ၄ င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများစုဆောင်းမှုကို ၄ င်းတို့နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သို့မဟုတ်တိုင်းပြည်အသစ်တွင်သူတို့၏စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအတွက်အလုပ်ရှင်များကိုအထူးပံ့ပိုးသည်။
တိုင်းပြည်အလုပ်သမား ၀ န်ကြီးဌာနသို့တရားဝင်တိုင်ပင်ခြင်းနှင့်လျှောက်လွှာတင်ခြင်း။
အတွေ့အကြုံများ၊ ဥပဒေများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဖြေရှင်းနည်းများ
လိုအပ်ချက်များနှင့်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းပေါ် အခြေခံ၍ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးသင့်လျော်သောအကြံပြုချက်များ။
ရွေးချယ်ပြီးသည့်အခါတိုင်းပြည်၏အလုပ်သမား ၀ န်ကြီးဌာနတွင်လျှောက်လွှာတင်ခြင်း။
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ 106 နိုင်ငံများ။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာဖွေနေသောအလုပ်ရှင်များကို ၄ င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများစုဆောင်းမှုအား ၄ င်းတို့၏နိုင်ငံသို့လွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားနိုင်ငံအသစ်သို့တိုးချဲ့ခြင်းအတွက်အထူးအကူအညီပေးခြင်း။
quick Connect ကို
နိုင်ငံ၏ဥပဒေ၊ အတွေ့အကြုံနှင့်အကောင်းဆုံးဥပဒေကျင့်ထုံးများအပေါ် အခြေခံ၍ နေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ
မိသားစုများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်နေထိုင်ရန်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်။ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း!
အဆင့် 1 ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိရန်၊
အဆင့်2နောက်ကျောအခြေခံ
စျေးနှုန်းချိုသာသော Logo ဒီဇိုင်း
အဆင့်3မှန်ကန်တဲ့အရာမှန်မှန်လုပ်ပါ
Virtual ဖုန်းနံပါတ် (VOIP)
အဆင့်4အဖွဲ့စုဆောင်းမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု
အဆင့်5သင်၏အနာဂတ်ကိုလုံခြုံအောင်ထားပါ
ကမ်းလွန်နှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှု
သင်၏စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုနှင့်စတင်ရန်လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ စီးပွားရေးအထောက်အကူများစွာဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး မှမပေးနိုင်ပါ။ ဘယ်အချိန်မဆိုဘယ်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာ!
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးနှင့်စျေးအသက်သာဆုံးသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်စျေးနှုန်းများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကူညီပေးသည့်အခြားကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အထူးထောက်ပံ့မှု
နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှစတင်လုပ်ကိုင်သူများအတွက်အထူးပညာရှင်လမ်းညွှန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်သည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စျေးကွက်နှုန်းထက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃၀% ခန့်ပိုမိုသက်သာသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် ၃၀% မဟုတ်လျှင်၊ အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်သင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့များပေးနေဆဲဖြစ်သည်။
LLC၊ JSC သို့မဟုတ် OOO ကုမ္ပဏီမှကန့်သတ်မထားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီအမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
ကမ်းလွန်နှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်စာရင်းနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်အကောင့်နှစ်ခုလုံးအတွက်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုများနှင့်ကုန်းတွင်းတရားစီရင်မှုများတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်သည်။
ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ပြီးသည်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အထူးအထောက်အပံ့။
နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံမှလုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်သူများအတွက်အထူးကျွမ်းကျင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်စျေးကွက်ပေါက်စျေးထက်စျေးသက်သာပါသည်။
သင်ဟာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်စေ၊ ကြီးကြီးမားမားကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်စေပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အထောက်အပံ့ကိုပေးပါတယ်။
ငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway မှာန်ဆောင်မှုများ
နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်လည်းအန္တရာယ်ရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကုန်သည်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည်
မြင့်မားသောစွန့်စားမှုရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လည်းအထောက်အပံ့ပေးနိုင်သော်လည်း AML နှင့် KYC လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရမည်။
Merchant Account ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
နိုင်ငံပေါင်း 170 ကျော်မှငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံ။
ဘဏ်အကောင့်၊ အွန်လိုင်းငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း၊
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသောလိပ်စာတစ်ခုပေးသောတစ်လလျှင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာ ၆၅ ခုတွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းဖွင့်ထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစင်တာများ၊ အခမဲ့ lancers များ၊ အသေးစား၊ အလတ်စားနှင့်အကြီးစားစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်မျိုးဆက်သစ် VoIP စီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးသည်၊ သင်၏စီးပွားရေးကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားကြာမြင့်စွာအမြန်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်ဘဲတပ်ဆင်နိုင်သည်။
နိုင်ငံတကာ virtual နံပါတ်များ
အခမဲ့ Cloud PBX
ကျနော်တို့စိတ်ကြိုက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးဖြေရှင်းချက် afforbable ကုန်ကျစရိတ်မှာပေး! သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးခုကိုအမျိုးအစား ၃ မျိုး ခွဲ၍ အထူးပြုပေးသည်။
၁။ ရှိပြီးသားစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ယူခြင်း / ရောင်းချခြင်း
စာရင်း / တင်ရန်လိုအပ်ချက်ဖန်တီးပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်အမျိုးမျိုးသို့အောင်မြင်စွာမိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုမည့်ကျယ်ပြန့်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးချဲ့ထွင်မှုဖြေရှင်းနည်းများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း၊ ရုံးခန်းသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ပစ္စည်းများကိုငှားရမ်းခြင်း၊ သငျသညျသစ်တစ်ခုတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်လိမ့်မယ်။
ယူအက်စ်အေ ၄၉ တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ၁၀၆ ခုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကမ္ဘာ့တရားစီရင်မှုအားလုံးနီးပါးတွင်ကုန်းတွင်း၊ အလယ်ပိုင်းနှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း။ လူကြီးမင်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုနှင့်အတူကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းပါသည်။
One Stop Shop သည်မြန်ဆန်လွယ်ကူပြီးကျန်တာတွေအားလုံးယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့စျေးနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့နေရာအားလုံးနီးပါးတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
ရောင်းရန်၊ ၀ ယ်ရန်နှင့်ငှားရန်ရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
အဆင်သင့်လုပ်ထားသည့်လုပ်ငန်းကို ၀ ယ်ယူပါသို့မဟုတ်ငှားပါ။
Setup Business သို့မဟုတ် Expand Business
တတ်နိုင်သော IT ဖြေရှင်းချက်
နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည့်အဆင်သင့်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ။
အသက် ၃ လမှအနှစ် ၂၀ အထိ
Off Shore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥရောပနိုင်ငံများ
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Liechtenstein - Anstalt - GMBH
Off Shore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥရောပပြည်ထောင်စုနိုင်ငံများ
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလူဇင်ဘတ် - SARL
Cayman Islands - Shshas ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Off Shore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းသြစတြေးလျနှင့်သမုဒ္ဒရာနိုင်ငံများ
Off Shore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများ
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း RAK အခမဲ့ဇုန်
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Ajman အခမဲ့ဇုန်
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Mauritius AC
Off Shore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
အလွန်အမည်ခံအခကြေးငွေမှာဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများ 24 X7။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများ - လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ စီးပွားရေးရှေ့နေများနှင့်ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီများမှအကောင်းဆုံးနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောထိပ်တန်းရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။
တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဥပဒေရေးရာ Pakages
စျေးနှုန်းချိုသာသောဖွဲ့စည်းပုံရှိထိပ်တန်းရှေ့နေများနှင့်ရှေ့နေများအတွက်နောက်ထပ်ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ။
တစ် ဦး ချင်းစီအဘို့ $500
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုနားလည်ပြီးနောက်မှသာသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောလူတစ် ဦး ချင်းစီ၊ မိသားစုများနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်စိတ်ကြိုက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္Consultာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့်ဘဏ္Cာရေးဆိုင်ရာတွဲဖက်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်။
တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောအတွေ့အကြုံ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုမြောက်မြားစွာမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်အလွတ်တန်းများကိုကူညီပံ့ပိုးကူညီပေးနေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Million Makers တွင်ပထမဆုံးစီးပွားရေးကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်နှင့်ကြွေးရှင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။
စိတ်ကြိုက် HR Solutions
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတကာမှစက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါးနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါးကိုလုပ်ကိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအား HR Consulting & Outsourcing၊ Talent Acquisition၊ လုပ်ခလစာ outsourcing၊ ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်စကားပြန်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောဖြေရှင်းမှုများဖြင့်လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။
ကုမ္ပဏီများကိုမှန်ကန်စွာရှာရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ပရိုဖိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်သော။
ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ဆိုက် (အခမဲ့) ကိုသုံးပါ။
ကုမ္ပဏီများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ကြီးမားသောဒေတာဘေ့စ်ကိုအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီး Job Posting Packages ကိုလည်း ၀ ယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌အိုင်တီနည်းပညာဖြင့်ဖြေရှင်းမှုများကိုပြုလုပ်ပေးပါသည်
အကောင်းဆုံးအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးအတွေ့အကြုံကြွယ်ဝမှုနေ့စဉ်တိုးတက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများဆက်သွယ်ရန်အချက်တစ်ချက်သင်၏ရွေးချယ်မှုအတွက်ငွေပေးချေမှုကာလ၊ Cryptocurrencies တွင်ပေးချေခြင်းသင်၏အောင်မြင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုဖြစ်သည်
သုံးသပ်ချက် 2018 ခုအပေါ်အခြေခံသည်
- HR အတိုင်ပင်ခံ
- Virtual ရုံး
- Virtual Numbers - VoIP Solutions
- အကောင့်များ outsourcing
- စိတ်ကြိုက် HR Solutions
- App ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
- BlockChain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
- Classified Portal ကို
- အိမ်ခြံမြေ Portal
အာဂျင်တီးနား၊ သြစတြီးယား၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဘဟားမား၊ ဘာရိန်း၊ ဘယ်လာရုစ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဘယ်လီးစ်၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ဘော့စနီးယား၊ ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ တရုတ်၊ ကော့စတာရီကာ၊ ခရိုအေးရှား၊ ကျူးဘား၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒိန်းမတ်၊ ဒူဘိုင်း၊ ဒိုမီနီကာ၊ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒိုဟာ၊ အိုက်စလန်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အီရန်၊ အိုင်ယာလန်၊ အိုင်ယာလန်၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ ကာဇက်စတန်၊ ကူဝိတ်၊ ကာဂျစ္စတန်၊ လတ်ဗီးယား၊ , နယ်သာလန်၊ နယူးဇီလန်၊ အိုမန်၊ နော်ဝေး၊ ပနားမား၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီ၊ ပါရာဂွေး၊ ဖိလစ်ပိုင် ပိုလန်စိန့်ကစ်စ်၊ စိန့်လူစီယာ၊ စိန့်လူစီယာ၊ ဆန်မာရီနို၊ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား၊ ဆားဘီးယား၊ စဲရှဲလ်ရှယ်လီ၊ စင်ကာပူ၊ စလိုဗက်ကီးယား၊ , ဆွီဒင်, ဆွစ်ဇာလန်, ထိုင်ဝမ်, တာဂျစ်ကစ္စတန်, ထိုင်း, တူရကီ, တူရကီ, ယူကရိန်း, ယူအေအီး, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, အမေရိကန်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, အမေရိကန်, UKဗင်နီဇွဲလား၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ ဗီယက်နမ်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ အန်ဒိုရာ၊ အင်ဂိုလာ၊ အင်ဂိုလာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ, ဘာဘေးဒိုးစ်၊ ဘူတန်၊ ဘော့စဝါနာ၊ ဘရူနိုင်း၊ ဘူရွန်ဒီ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ကင်မရွန်း၊ ဂါဘန်၊ ဂမ်ဘီယာ၊ ဂါနာ၊ ဂိုင်ယာနာ၊ အီရတ်၊ အစ္စရေး၊ ဂျမေကာ၊ ဂျော်ဒန်၊ ကင်ညာ၊ လာအို၊ လက်ဘနွန်၊ လိုက်ဘေးရီးယား၊ ဆီးရီးယား၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ တွန်ဂါ၊ တူနီးရှား၊ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်၊ ယူဂန်ဒါနှင့်ဥဇဘက်ကစ္စတန်တို့ဖြစ်ကြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
၀ ါရှင်တန်၊ အလာစကာ၊ ဥက္ကလာဟိုးမား၊ ဖလော်ရီဒါ၊ Alabama၊ Arkansas၊ တောင်ဒါကိုတာ၊ ကိုလံဘီယာခရိုင်၊ မစ္စစ္စပီ၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ မင်နီဆိုတာ၊ မက္ကဆီကို၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ ဗာဂျီးနီးယား၊ ကွန်နက်တီကတ်၊ အိုင်ဒါဟို၊ နီဗားဒါး၊ မေရီလန်း၊ နယူးယောက်၊ ကော်လိုရာဒို၊ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၊ အနောက်ဗာဂျီးနီးယား၊ နယူးဂျာစီပြည်နယ်၊ အရီဇိုးနား၊ အော်ရီဂွန်၊ ၀ ိုင်မင်မစ်ချီဂန်၊ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား၊ Rhode Island နှင့် Nebraska
Albuquerque၊ Almaty၊ Amsterdam၊ အန္တာတိက၊ Ankara, Annapolis, Antalya, Antwerp, Ar Rayyan, Astana, Asuncion, Athens, Atlanta, Auckland, Augusta, Austin, Bahrain, Al Ahmadi, Ahmadi, Al Ain, Al Fujayrah, Fujayrah, Ahmedabad, Albuquerque၊ ဘာလီ၊ ဘန်ဂလို၊ ဘန်ဂလို၊ ဘန်ဂလာရူ၊ ဘန်ကောက်၊ ဗန်ဂါလီလာ၊ Banqiao၊ ဘာစီလိုနာ၊ ဘေဆယ်လ်၊ Montgomery, Basseterre, Baton Rouge, Batumi, Beijing, Belgrade, Belize City, Bergen, Berlin, Bern, Bill, Birmingham, Bishkek, Boise စီးတီး, ဘုံဘေ, ဘော်စတွန်, Brasilia, Bratislava, Bridgeport, Brisbane, Brno, Bucharest, Budapest, Buenos Aires, Burlington, Bursa, Busan, Busan, Calgary, Cape Town, Caracas, Castries, Celje, ကတ္တား၊ Chandigarh, Charleston, Charlotte, Chengdu, ကိုလံဘို၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကိုလံဘတ်စ်၊ ကိုပင်ဟေဂင်၊ ကိုဒေါ့ဘ်၊ ဒေဂူ၊ ဒလပ်စ်၊ ဒူးဂ်ဗားလ်စ်၊ ဒါဗာဗိုစီးတီး၊ ဒီစီ၊ ဒင်းဗား၊ ဒေလီ၊ Des Moines၊ ဒက်ထရွိုက်၊ , Donetsk, ဒူဘိုင်း, Dublin, Durban, Durres, Dushanbe, Ecatepec de Morelos, Edinburgh, Egk ကွမ်ကျိုး၊ ဂွာတီမာလာစီးတီး၊ ဂွာယာကပ်လ်၊ ဟွာဟင်း၊ ဟမ်းဘတ်၊ ဟနွိုင်း၊ ဟနွိုင်း၊ ဟလာဆန်၊ ဟယ်လ်စင်ကီ၊ ဟင်ဆန်၊ ဟိုချီမင်း၊ ဟောင်ကောင်၊ ဟိုနိုလူလူ၊ omi, Fargo, Florence, Frankfurt, Geneve, George Town, Goa, Goteborg၊ အစ္စလာမ္မစ်၊ အစ်စမမ်၊ Iztapalapa၊ ဂျက်ဆင်၊ ဂျကာတာ၊ ဂျေဒဒါ၊ ဂျေဆာဒါ၊ ဂျေရုဆလင်၊ ဂျေရုဆလင်၊ ဂျိုဟန်ဘာရူ၊ ကာဒူဝါလာ၊ ကဆပ်စ်၊ ကကူဝါ၊ ကွာလာလမ်ပူ၊ ကူဝိတ်စီးတီး၊ ကိယက်ဗ်မြို့၊ လီဆပ်ဂတ်စ်၊ လိဒ်၊ လင်ကွန်း၊ လစ္စဘွန်း၊ Little Rock၊ လီဗာပူးလ်၊ လန်ဒန်မက်ဆီရာ၊ မက်ဒရစ်၊ မာရာဂရာ၊ မာဂျူရို၊ ယောက်ျား၊ Malmoe၊ မန်ချက်စတာ၊ မနီလာ၊ Maracaibo, Maracay, Maribor, Mashhad, မက္ကာ, Medan, မက်ဒီနာ, မဲလ်ဘုန်း, မမ်ဖစ်, မက္ကစီကို, နယူးဒေလီ၊ နယူးဒေလီ၊ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်၊ နီကိုစီယာ၊ နစ်ဂ်နိုဂေါရ်၊ နော့ဖ်ဘာရီ၊ နော်ဖော့စ်၊ နယူးဒေလီ၊ နယူးဒေလီ၊ နယူးယောက်၊ အိုလံပစ်၊ အိုမီစ၊ အော်လန်ဒို၊ အော့စလို၊ အော့စလို၊ ကုန်းလမ်းဥယျာဉ်၊ ပနားမားမြို့၊ ပါရီ၊ ပါတီ၊ ပက်ထရာ၊ ပတ္တာ၊ ပတ္တရာ၊ ပါ့တ်၊ ပက်တလီယာယာယာ၊ ဖီလစ်ဒဲလ်ဖီးယား၊ ကွမ်ဘိုစီးတီး၊ ကွီတို၊ Raleigh၊ Ras al Khaimah၊ Al Khaimah, Reykjavik, Richmond, Riga, Rio de Janeiro, Riyadh၊ Port Louis, Port Moresby, Port Vila, Portland, Portland, Porto, Prague, Providence, Puente Alto စိန့်ပီတာစဘတ်၊ စိန့်ပီတာစဘတ်၊ လမ်၊ ဆား Lake City, Salto၊ Salvador, Samara, San Antonio, San Francisco, San Jose, San Juan, Santa Cruz de la Sierra, Santa Fe, Santa Venera, Santiago, Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, Sao Paulo, Schaan, Seattle, Seoul စင်္ကာပူ၊ Sioux Falls၊ Skopje၊ ဆိုဖီယာ၊ စပိန်မြို့၊ စိန့်လူးဝစ်၊ စိန့်ပေါလ်၊ စတော့ဟုမ်း၊ ဆူရာဘိုင်ယာ၊ ဆူရာ၊ ဆစ်ဒနီ၊ ဆိုင်းရာကူစ်း၊ Taoyuan City, Tartu, Tbilisi, Tehran, Tel Aviv, ထိုင်း, Thessaloniki, Tirana, Tiraspol, တိုကျို, တိုရွန်တို, တိုရွန်တို, Trondheim, တူရင်, Vaduz, Valencia, Valencia, Valletta, ဗန်ကူးဗား, ဗစ်တိုးရီးယား၊ ဗီယင်နာ၊ Warsaw ကို, Weno, West Valley City, Wichita, Wilmington, Winnipeg, Wroclaw, Wuhan, Yekaterinburg, Yerevan, Yokohama, Yonkers, Zagreb, Zaragoza, Zurich, Kabul, Algiers, Andorra la Vella, Luanda, Dhaka, Bridgetown, Holetown, Thimphu၊ , Bandar Seri Begawan, Bujumbura, Phnom Penh, Yaounde, N'Djamena, Kinshasa, Cairo, Alexandria, San Salvador, Addis Ababa, Libreville, Banjul, Accra, Kumasi, Georgetown, Bagddad, Mosul, ဂျေရုဆလင်, Haifa, Kingston, Amman, မင်ဘာဆာ၊ ဗီယန်ကျန်း၊ ဘေရွတ်၊ မွန်ရိုးဗီးယား၊ ထရီပိုလီ၊ အန်နန်နန်နီရိုဗို၊ ဘာမာကို၊ ရာဘတ်၊ ရာဘတ်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ၀ င်းဒိုး၊ ကတ္တမန္ဒူ၊ မာနာဂွာ၊ လီယွန်၊ နီယမ်၊ ဇင်ဒါ၊ ဂို့စ်၊ အက်ပ်၊ ဖရီးတောင်း၊ ဘို၊ မိုဂဒစ်ရှူး၊ အမ်ဒူမန်၊ ဒမာသက်၊ အက်လက်ပို၊ ဒါအက်ဆလမ်၊ Mwanza၊ Nuku'alofa၊ Tunis၊ Ashgabat၊
ဥရောပကော်မရှင် | World Trade Organization | နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေ | ကမ္ဘာ့ဘဏ် | အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ | ကနေဒါ၏သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအသင်း | NASSCOM | လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးအာဏာပိုင် | ကနေဒါဥပဒေစည်းမျဉ်းကောင်စီ၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ | အမေရိကန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများအသင်း | ယူနီဆက် | WHO က | UNHRC | ကုလသမဂ္ဂ | အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ | ဗြိတိန်အစိုးရ | ယူအက်စ်အေအစိုးရ | အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရ | စင်ကာပူအစိုးရ | သြစတြေးလျအစိုးရ | အိန္ဒိယအစိုးရ | တရုတ်အစိုးရ | ပြင်သစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်။ | ကနေဒါအစိုးရ | ရုရှားအစိုးရ | အီတလီအစိုးရကိုယ်စားလှယ်။ | ITIC | ပြည်နယ်၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန | အိမ်ဖြူတော် | ဘရာဇီးအစိုးရ | မက္ကစီကိုအစိုးရကိုယ်စားလှယ်။ | မလေးရှားအစိုးရ | တောင်အာဖရိကအစိုးရ။ | ဂျာမနီအစိုးရ
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီ၊ မိသားစုနှင့်ကုမ္ပဏီတိုင်းတွင်ပန်းတိုင်များ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ အခြေအနေများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာနားလည်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအတွက်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ချဉ်းကပ်မှုကိုအမြဲလုပ်ဆောင်သည်။
X ကို 24 7
ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းaလက်မှတ်
442033184026 + ကေနဒါ
16479456704 + ၾသစေတးလ်
61290984441 + ပိုလန်
48226022326 + စင္ကာပူႏုိင္ငံ
6531593709 + ဘရာဇီး
556140426941 + အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
19299992153 + အာမေးနီးယား
အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး Google Play စ
မူပိုင်ခွင့်© 2004 - 2021 ထုတ်လုပ်သူသန်း။ MM Solutions Inc. All Rights Reserved ။
ခွင | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ | အသိအမှတ်ပြု